.: ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ရင်
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ရင်
အလံနီစရိုက်နှင့် လူလိုမသိတတ်သူများအကြောင်း (က)
NLD နဲ့ ကျနော်တို့အများကြီးလုပ်ဘူးပါတယ်။ မကြိုက်တာတွေ အားမရတာတွေကအများကြီးပါ။ သူတို့ရှေ့မှာတည့်တည့်ဝေဖန်လို့ ကျနော်တို့ကိုထုတ်ခဲ့ပါသ်ည်။ ဦးအောင်ရွှေ ကို ဆဲထွက်ခဲ့ဘူးပါသည်။။သို့သော် အကြပ်အတည်းကြားမှာ လူလိုသိရပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ရမည့်အချိန်ကိုသိရပါတယ်။ ကိုယ်က စစ်အာဏာရှင်သေနတ်ပြောင်းဝကိုရင်မဆိုင်ရဲလို့ထွက်ပြေးသွားပြီး၊
နယ်စပ်မှ ၊ရဲရဲတောက်စကားပြောနေသူများအစား ကျနော်ရှက်ပါတယ်။ သံဝေဂရ စရာတော့ကောင်းပါတယ်။
ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေက တော်လှန်ရေးမီးရှူးမီးပန်းလွှတ်နေတာကိုမြင်တော့ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
ဒေါ်စု ကို ကိုးကွယ်စရာမလိုပါ။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာ လူထုကြားမှာနေလို့၊ စစ်အာဏာရှင်တွေအညိုးကြီး
ရက်စက်လို့ လူထုကချစ်သည်။“ဘာမှမလုပ်လဲ ဗိုလ်ချုပ်သမီး ကိုချစ်နေမှာပဲ ” လို့ အက်ဆစ် ဆိုသူက ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်စုနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ (၅၄) ဟာ နတ်ကွန်းလိုဖြစ်သွားမယ် လို့ ပြောရှာပါတယ်။
ပြည်သူတွေက ဘယ်သူဟာ အရက်ဆိုင်သွားအချန်ဖြုန်းနေတာ။ ဘယ်ဟာ ပြတိုက်ဖြစ်နိုင်တာ သိကြပါသည်။။
ကိုလွဏ်းဆွေတို့အုပ်စုသာ အရက်ဆိုင်မှာ သမိုင်းမကျန်ရစ်စေပါနဲ့။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုလည်း မိတ်ဆက်ပါအုံး။
“ဦးအေးမြင့်ကိုမှားတယ် လို့ မဆိုနိုင်ဘူး“ဆိုသည့် မောင်လွှဏ်းဆွေဘလောက်မှာ ဖေါ်ပြထားသော အက်ဆစ် ဆိုသူသည်
ဦးအေးမြင့်ရဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေကို မဲထည့်ကြ ဆိုတာကိုသဘောတူတဲ့လူတယောက်အဖြစ်နားလည်လိုက်ပါသည်။
ဒါဖြင့် ခင်မောင်ဆွေကိုမဲထည့်ဖို့၊ အိမ်အလည်လာ မဲဆွယ်ပေးဖို့ လက်ခံနေတဲ့ ဦးအေးမြင့်ကို ထောက်ခံသူ အက်ဆစ် ( လွဏ်းဆွေ)
အယ်လ်ဒီကိုဘာလို့အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ခိုင်းရတာလဲ။ ကျနော်နားလည်ဒါက ဒီလိုပါခင်ဗျား။
၁၉၄၈ တုန်းက ဗကပ ကို ဖဆလပ လုပ်သလိုမျိုး အတင်းဖမ်းဆီး တောထဲမောင်းထုတ်ချင်တာမို့ပါ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒီလိုလုပ်ပြီးမှာ ဦးခင်မောင်ဆွေနဲ့ ဦးအေးမြင့်ပေါင်းပြီး အောင်သေအောင်စားစားရမှာကိုး။ အခုပဲ NDF ဟာ ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေဆီက ပိုက်ဆံတွေ၊ ဦးတင်မောင်သန်း ( သင့်ဘဝ) ကကြားကနေလော်ဘီလုပ်၊
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက လက်မှတ်ထိုးယူ ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေတယ် မို့လား။ အတွေ့အကြုံမရှိ၊ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့
လူစိတ်ဝင်စားခံချင်တဲ့သူတွေကတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ထိုင်အရက်သောက်နေတဲ့ နယ်စပ်က အမူးသမားများပါလေ။
အလုပ်သမားများဆီက ပိုက်ဆံပြန်ကောက်နေသည့် လေကော်မတီများ။ဦးအေးမြင့် ကို အတွင်းမှာမြှောက်ပေးပြီး သူတို့က အပြင်ကနေကြပ်မည်။
သူတို့မှာသူတို့၏အမာခံလူများရှိလျင် လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြာပြီ။ ဘာကြောင့်မဖြစ်သနည်း။
အကြောင်းကား လေဖြင့် ကြပ်နေသူများနောက် မည်သူမျှမလိုက်ကြပါး။
အမှန်က လေထုတိုက်ပွဲကော်မတီ နဲ့ ဦးအေးမြင့် က အဆက်အသွယ်ရှိတယ်၊ ညှိလုပ်ကြတယ် ဆိုတာသိထားကြပြီးသား။
ပြောပုံဆိုပုံ တွေက ပုံစံက တပုံစံတည်းလေ။ ဦးအေးမြင့်ထွက်တဲ့စကားတွေက လေထုကော်မတီက ကောင်တွေမြှောက်ပေးတဲ့စကားတွေ
လို့ လူတွေက သိပြီးသား။ လွဏ်းဆွေဘလောက်က စီဘောက်မှာ ဦးအေးမြင့် ကို မေးခွန်းထုတ်တဲ့ဟာတွေကို ဖျက်ပစ်တယ်။
သူတို့ကိုထောက်ခံမဲ့ဟာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတယ်။ တော်တော်ကလေးကလားနိုင်တဲ့ကောင်တွေ။
” မင်းတို့ဥာဏ် တထွာတမိုက်ရယ် နဲ့ ငြင်းဖို့ဆန် အကြံခက်တယ်ကွဲ့” ဆိုသလိုမျိုး။
သူတို့ ဥာဏ်လေးတထွာတမိုက်လောက်နဲ့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်ကြနေကြတာ။ဒီလောက် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ကြရင် ပြည်တွင်းကိုပြန်ပါလား။
လေကော်မတီဖွဲ့ပြီး အပြင်ကနေ ညွှန်ကြားချက်ပေးနေတာထက်၊ ပြည်သူကိုရှေ့က ဦးဆောင်ပါလား။ မိုးသီးဇွန် ထောင်ကျရင် စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ နေဘူးရင် ယုံလိုက်ပါမယ်။ ကို့ယိုးကားရားအစီအစဉ်များနှင့် NLD ကိုလမ်းမပေါ်မောင်းချပြီး အဖမ်းခံစေချင်ရင်၊ လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီမှ လူများလည်း လမ်းမပေါ်ထွက်ပါ။ ပြည်တွင်းမှာ အစိုးရဖွဲ့ပါ။ ကျနော်တို့လည်းလိုက်ပါမယ်။
လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ ရဲ့ ဆက်သွယ်ရမဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ မိုးသီးဇွန် နဲ့ သံဒုတ် ။
ဒါဆို ထုံးစံအတိုင်း စာအုပ်ဟောင်းထဲက စကားလုံးဟောင်းတွေကို အမြောက်ဆံလိုလွှတ်ပြီး ဘာမှဖြစ်မဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားမို့လား။
အတွေ့အကြုံက အနှစ် (၂၀) ကျော်သွားပြီလေ။ မိုးသီးဇွန်လည်းရခဲ့တဲ့ငွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။
ပီပီ (၂၁)၊ တပ်ပေါင်းစု၊ အေဘီ အစုံပဲ။ သူ့ကို ဒိုနာကစိတ်ပျက်ပြီး ငွေဖြတ်တော့ ကျန်တဲ့သူကို လုပ်စားတွေဆိုပြီး အသံထွက်တော့သည်။
အမှန်က သူလည်း ဘာမှမထူးဘူး။ ကွာခြားချက်က ဟိုကောင်တွေက စံနစ်တကျ စာရင်းပြတယ်။ သူက ထုံးစံအတိုင်း စည်းမရှိကမ်းမရှိ။ အခုဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲ။ လွဏ်းဆွေ လို နိုင်ငံရေးသူငယ်နပ်စားလေးနဲ့သွားပေါင်းပြီး အဖွဲ့ဖွဲ့ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်မို့လား။
သူက အယ်လ်ဒီကိုသာ အပြစ်တင်နေတာ၊ သူနဲ့ပုလင်းတူဘူးဆို့တွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကို ငွေရှာပေးနေတာ ကို တခုမှ မပြောဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ အယ်လ်ဒီကို အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ခိုင်းချင်တဲ့ မိုးသီးဇွန်က ၁၉၈၉ မှာ သူ့ကိုလည်းဖမ်းမယ်ဆိုတော့ ဘာလို့ထွက်ပြေးသွားတာလဲ။ ဘာလို့ပြည်သူကြားမှာ မနေရတာလဲ။ မနေရဲတာလား။ ဒမဖ ခေါင်းဆောင်၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆို၊ တာဝန်မဲ့လာချည်းလား။ အလံပစ်ပြေးသွားတာကလည်းသူ၊ ရဲရဲတောက်ပြောနေတာလဲ သူ၊ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့ကောင်၊ အလံနီဇာတ်ပျက်တွေနှင့် မတိမ်းမယိမ်းလုပ်နေသူများ။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဆိုသူကိုတော့ ပြောစရာစကားမရှိပါ။ သူ့ရဲ့အကြောင်းကို ကျနော်တို့စာပေလောကမှာ သိထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ ဦးခင်မောင်တိုး (မိုးမိတ်) နဲ့ သူ့ရဲ့အဖေ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကြောင့် မြှားနတ်မောင် မှာ အယ်ဒီတာဖြစ်လာသူ၊ အိမ်ထောင်ရေးကိုကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးသွားသူ။ ( ကျန်ခဲ့တဲ့မိန်းမ ထိခိုက်မှာစိုးလို့အသေးစိတ်မပြောချင်ပါ)။
၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၆ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေ တဝုန်းဝုန်းဖြစ်နေချိန်မှာ ဆေးတက္ကသိုလ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်သွားသူ။
သူဘိုင်အိုဂရပ်ဖီ မိတ်ဆက်မှာကြည့်လေ။ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပေမဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့ ဒီလိုလူက ဘယ်နှယ် ပဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စနဲ့နယ်စပ်ရောက်ခဲ့ပြီးမှ ရဲရဲတောက်တွေပစ်လွှတ်နေတာလဲ။ ဒီလောက်ရဲရဲတောက်နေရင်
အရက်သောက်ပြီး အချိန်ဖြုံးမနေပဲ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ဘာလို့လက်နက်ကိုင်မတိုက်ရတာလဲ။ ဒါကြောင့် ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရှိတဲ့ မောင်လွဏ်းဆွေတယောက်ပြောချင်တာပြောနေတာကို စန္ဒယားတီးတတ်ခါစ ကောင်လေး
စန္ဒယားခလုပ်တွေအကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာပြောနေတတ်သူတယောက်တယောက်လိုဖြစ်လို့၊ပြောစရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘူး လို့ပြောတာပါ။ အရက်သမား အရက်မူးပြောလေ့ရှိတဲ့စကားကြားဘူးတယ်မို့လား။
“ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်ဘူးကွ၊ ငါ့လောက်မိုက်ရင် ထွက်ခဲ့ဆိုတာ” လေ။ဒေါက်တာလွမ်းဆွေလည်း အဲ့သလို သတ္တိကောင်းတာနေမှာပေါ့။
ဒါတောင်နယ်စပ်ရောက်မှ ပြောရဲတာ။ဘလောက်ကလေးဖွင့်ထားတော့ စင်တခုရပြီဆိုပြီး တက်တက်အော်တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ သတ္တိရှိပါ။ ကျူပ်တို့လည်း သတ္တိရှိပါတယ်။
ဒေါ်စုက အဖမ်းခံနေရပါတယ်။ ဘာမှလုပ်လို့မရသေးပါ။ အဖမ်းမခံရသေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ ပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်ပါ။ ခင်ဗျားတို့က NLD အဖိုးကြီးတွေထက် အများကြီးငယ်တော့ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ လူထုအုံကြွမှုလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့လည်းလိုက်လုပ်ပါမယ်။
အဝေးကနေ အာမနေပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ခိုင်းတိုင်းလိုက်လုပ်ရအောင် လူတိုင်းက ခင်ဗျားတို့လောက်တော့ ပညာတတ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှိကြပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လို ယောင်္ကျား စနေ့နေ့မှာ ဘောလုံးကန်ဖို့ အီတလီမှ အင်္ကျီ
ချုပ်ပြီးပြောရရင် အလံရှူးလုပ်တာတွေရပ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့လို လူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်။
သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ယုံရင် နှစ်ဘက်စလုံးကစာတွေတင်လိုက်ပါ။ ဒီဘောက်မှာ သူများကိုရေးသလို၊ ခင်ဗျားတို့ကိုရေးတဲ့သူကို မဘမ်းပါနဲ့။
ခင်ဗျားတို့လိုပဲ ဝါဒဖြန့်ချီရေးကို ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ လူလေးစားအောင်နေရင် ခင်ဗျားတို့အယူအဆကို လူတွေလိုက်လာမှာပါ။
အရက်သမားတွေလို ပေါက်လွှတ်ပဲစားလျှောက်အော်နေရင်တော့ ဘယ်သူမှ လိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ခင်ဗျားတို့ဘာသာ လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ မကလို့၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတ္တဝါများ ကော်မတီဖွဲ့ဖွဲ့၊ စိတ်မလှုပ်ရှားဘူး။
ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်လို့ပါ။ အနစ်နာခံတိုက်ပွဲဝင်ပြလိုက်။ လူထုပါလာမယ်။ ဒါပါပဲ။
နာမည်ဝှက်နဲ့ရေးရင် နာမည်ဝှက်တွေပေါ်လာမယ်။ခင်ဗျားတို့လိုပဲ ကျနော်တို့လည်း အချိန်အားနေပါတယ်။ နေရာအများကြီးကနေတင်နေအုံးမှာပါ။ ဆက်ရေးကြပါအုံး လွဏ်းဆွေ ခေါ် အက်ဆစ်အရက်သမား ခင်ဗျား
Posted by Always at 9/16/2010 08:01:00 AM
Waihnin Pwint Thon Speaks for Burma and Political ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (၂၂)နှစ်မြောက် မွေးေ...
လတ်တလောဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘေ...
သခင်အုန်းမြင့် ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ဦးဝင်းတင်ကိုယ်တ...
ကိုသန်းဝင်းနှင့် ကိုအောင်မိုးဝင်း ကိုမိုးသီးကို ပြ...
အမေရိကန်အစိုးရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုမည်...
စစ်အာဏာသိမ်း တရားမ၀င်စစ်အစိုးရအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်...
စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကော်မီတီ၏ အေ...
NLD ယောင်ဝါးဝါး လုပ်မနေတော့နှင့်၊ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆ...
အခုခေတ်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို လက်ထပ်မည်ဆိုရင် တကို...
ဧရာဝတီက သတင်းပေးသလိုနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို မအုံကြွ...
၁၂ နှစ်ရှိပြီ CRPP ဘယ်တော့ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်မှာလဲ...
မော်ဒယ်လ်လေးရေ ပစ္စည်းကကောင်းသေး၊ လတ်သေးတော့လည်း ဒီ...
လူရမ်းကားလက်နက်ကိုင်တပ်မှ လူငယ်နှစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင...
လွှတ်တော်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အချောင်ရပါက လာဘ်စား...
34 Burmese Freedom fighter ဘော်လုံး အသင်း ဆီးမီးဖိ...
ဦးသုဝေ ၊ ဦးအေးလွင်နဲ့ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ပြီးတော့...
နယ်မြေကျဉ်းလာပြီဖြစ်သော မျိုးချစ်မြန်မာ (ခ) သူရိန်...
လုပ်ကြံခံရမည်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ စိုးရိမ...
စာကိုချေပ လူကိုကျေမှ . . .
၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးက မနုတ်ထွက်...
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်သူရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာ ထာဝရ...
" ရွှတ်"... အမေ့သားစကားတိုးတိုးပြောလှည့်ပါ